Jesosy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Jesoa na Jesosy)
Teraka Anelanelan'ny taona 7 sy 3 talohan'i J.K. tao Betlehema
Maty Taona 30 tao Jerosalema
Firenena Empira Romana
I Jesosy na Jesoa na Jeso dia Jiosy tany Palestina izay inoan'ny Kristiana ho zanak'Andriamanitra nirahina ho ety ambonin'ny tany hanavotra ny olombelona tamin'ny alalan'ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona indray. Izy no foto-pisian'ny Fivavahana kristiana. Antsoina koa hoe Jesoa Kristy na Jesosy Kristy izy.
1 Ny anaran'i Jesoa
1.2 Ireo olona mitovy anarana amin'i Jesoa na Jesosy
1.3 Ny fiantsona an'i Jesoa
2 Ny tantaran'i Jesoa araka ny Baiboly
2.1 Firazanany sy fahaterahany ary fahazazany
2.1.1 Firazanan'i Jesoa
2.1.2 Fanambaràn'ny Anjely Gabriela ny hahaterahan'i Jesoa
2.1.3 Ny fahaterahan'i Jesoa
2.1.4 Ny fandripahana ireo zaza tsy manan-tsiny nataon'i Heroda
2.2 Ny asan'i Jesoa
2.2.1 Fanombohan'ny asan'i Jesoa
2.2.2 Fandrosoan'ny asa sy fankahalana setrin'izany
2.2.3 Fotoana faramparany nanaovany ny asany
2.2.4 Fisamborana sy fitsarana ary fanomboana an'i Jesoa
2.2.5 Fitsanganan'i Jesoa ho velona sy iraka nampanaoviny
3 Ny finoana momba an'i Jesoa
3.1 Ny finoan'ny fivavahana kristiana
3.1.1 Ny mino ny maha Andriamanitra an'i Jesoa
3.1.2 Ny tsy mino ny maha Andriamanitra an'i Jesoa
3.2 Ny finoan'ny fivavahana tsy kristiana
Ny anaran'i JesoaHanova
Ny anarana hoe Jesoa dia hita ao amin'ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy fa ny Jesosy kosa ao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy. Ny hoe Jesosy dia fanagasiana ny teny anglisy hoe Jesus, izay avy amin'ny teny latina hoe Iesus, izay avy amin'ny teny grika hoe Ἰησοῦς / Iêsoûs, izay avy amin'ny tenyhebreo hoe Yeshua na Yehoshua.
Ny anarana hebreo lava hoe Yehoshua no ampiasaina amin'ny endrika fohy hoe Yeshua. Izany teny izany dia ahitana ny hoe Yeho na Yeh izay fanovan'ny hoe Yaho na Yah (sahala amin'izay hita ao amin'ny hoe Halelu Yah) izay fanafohezana ilay anaran'Andriamanitra hoe Yahweh na Jehovah. Ny hoe Yehoshua izany dia azo adika hoe "Mpamonjy i Yahweh" na "Yahweh dia famonjena". Mitovy fototra sy dika ny hoe Jesoa sy Josoa izay samy avy amin'ny teny hoe Yehoshua na Yeshua.
Ireo olona mitovy anarana amin'i Jesoa na JesosyHanova
Manonona olona 12 mitondra an’io anarana io i Flavio Josefa (Jiosy mpahay tantara tamin’ny taonjato voalohany), ary tsy anisan’izany ireo voaresaka ao amin’ny Baiboly. Hita koa io anarana io ao amin’ireo boky apokrifa na boky tsy anisan’ny Baiboly, izay nosoratana nandritra ireo taonjato vitsivitsy talohan’i Kristy.
Ilay anarana hoe Ἰησοῦς / Iêsoûs izay hita ao amin’ny Testamenta Vaovao tany am-boalohany ao amin’ny Asan’ny Apostoly (Asa 7.45) sy ny Epistily ho an'ny Hebreo (Heb. 4.8), dia manondro an’i Josoa, ilay mpitarika ny Israely taorian’i Mosesy.
Razamben’i Jesosy Kristy, ary azo inoana fa avy amin’ny reniny (Lio. 3.29) Josesy no hita ao amin’io andininy io, ao amin’ny sora-tanana fahiny sasany.
Kristianina mpiara-miasa tamin’i Paoly, ary azo inoana fa Jiosy. Nantsoina koa hoe Josto izy (Kol. 4.11).
Ny fiantsona an'i JesoaHanova
Mba hiavahany amin'ireo Jesoa, Jesosy na Josoa hafa dia matetika asiana fanampiny io anarana io ka manome ny hoe Jesoa Kristy (Jesosy Kristy), Kristy Jesoa (Kristy Jesosy) na Jesoa avy any Nazareta (Jesosy avy any Nazareta). I Nazareta no tanàna niaviany. Antsoina fotsiny amin'ny hoe Kristy koa izy. Ny hoe Mesia dia iantsoana azy ihany koa nefa tsy matetika izany, na dia mitovy hevitra amin'ny hoe Kristy. Ny hoe Kristy dia avy amin'ny teny grika hoe Χριστός / Khristos, izay fandikana ny teny hebreo hoe Meshiakh na Mashiakh, ka midika hoe "voahosotra", izany hoe voahosotr'Andriamanitra hanafaka ny Israely araka ny voalaza mialoha ao amin'ny Baiboly hebreo. Mety hialohavan'ny teny hoe Tompo ihany koa io anarana io ka ahazoana ny hoe Tompo Jesoa na Tompo Jesosy izay hafohezina indraindray amin'ny hoe Tompo.
Fanambaràna ny hahaterahan'i Jesoa, nataon'i Sandro Botticelli, taona 1489 na 1490.
Ny tantaran'i Jesoa araka ny BaibolyHanova
Ny tantara izay hofintinina eto dia izay hita indrindraindrindra ao amin'ny Filazantsara efatra sy ny Asan'ny Apostoly ao amin'ny Baiboly.
Firazanany sy fahaterahany ary fahazazanyHanova
Araka ny Filazantsara dia taranak'i Davida i Jesoa (Mat. 1.1-17 ; Lio. 3.23-38).
Fanambaràn'ny Anjely Gabriela ny hahaterahan'i JesoaHanova
Nambaran'ny Anjely Gabriela an'i Maria mialoha fa hiteraka an'i Jesoa izy. Teraka tao Betlehema i Jesoa raha namonjy fanisam-bahoaka ao ny ray sy reniny dia i Josefa sy i Maria.
Ny fahaterahan'i JesoaHanova
I Jesoa Zazakely, nataon'i Levieux
Ny fahaterahan'i Jesoa dia nambaran'ny anjely tamin'ny mpiandry ondry izay tonga namangy ny zazakely. Efapolo andro taorian'izay dia nentina tany Jerosalema i Jesoa amin'ny maha voalohan-teraka azy mba haseho any amin'ny tempoly araka ny lalàna hebreo (Lio. 2.21-24). Tonga namangy an'i Jesoa koa ny Magy.
Ny fandripahana ireo zaza tsy manan-tsiny nataon'i HerodaHanova
Atahoran'i Heroda ny hisian'ny olona mety hisolo azy amin'ny maha mpanjaka azy ka nieritreritra ny hamono ireo zazakely latsaky ny roa taona tao Betlehema. Natahotra ny fandripahana kasain'i Heroda hatao i Josefa sy i Maria araka ny tenin'ny anjely tamin'i Josefa amin'ny alalan'ny nofy ka lasa nandositra tany Egipta. (Mat. 2.13-23).
Ny asan'i JesoaHanova
Fanombohan'ny asan'i JesoaHanova
Fanaovam-batemy an'i Jesoa
Azo lazaina ho tamin'ny nahavitan'i Joany ny fanaovam-batisa an'i Jesoa tao amin'ny ony Jordana ny fotoana nahafahany nanomboka ny asany. Taorian'ny nampidirana am-ponja an'i Joany izany. Tany an-tany efitra izy tanatin'ny efapolo andro alohan'ny tena hiasany. Tao no naka fanahy azy ny devoly na demony. Nifindra nanaraka azy taorian'izany ry Joany mpanao batisa sy ny mpianany roalahy dia i Andrea sy i Joany (zanak'i Zebedio). Nanatevina koa i Simona Petera (na Piera). Nisy fotoana nankanesan'i Jesoa tany Galilea hitsidika ny fonenany ao Nazareta (Lio. 4.16-30). Nankany Kapernaomy izy nanomboka nampianatra momba ny Fanjakan'Andriamanitra sy nanasitrana marary maro.
Fandrosoan'ny asa sy fankahalana setrin'izanyHanova
Fananganana velona an'i Lazarosy, nataon'i Carl Heinrich Bloch, taona 1870.
Nampianatra ny amin'ny fitiavan' Andriamanitra tsy misy fepetra an'ireo osa sy mahantra sy ny amin'ny fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota izy indrindra nandritra ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra. Ny fanamafisany ny fahambonian'ny fahadiovam-po miohatra amin'ny fanajana ny lalàna jiosy dia nahatonga ny fankahalan'ny Fariseo azy izay nanahy sao hiala amin'ny lalàna ny olona. Ny Jiosy sasany koa dia natahotra sao mampiahiahy ny fitondrana romana izany fampianarana izany ka tsy hahatanteraka ny fananganana indray ny fanjakana jiosy.
Nitombo ihany anefa ny lazan'i Jesoa na teo izany fanoherana sy fankahalana azy izany. Nanohy nampiely ny fampianarany eran'i Galilea sy tamin'ireo mpianany izy. Nankany Betania aloha izy (Mar. 11.11-12) ka tamin'izany no nananganany an'i Lazarosy (na Lazara) ho velona (Joa. 11.1-44). Nankany Efraima koa izy hanohy ny asany (Joa. 11.54). Ny fotoana nanan-danja indrindra dia ilay fotoana nanambaràny tamin'i Petera ny maha zanak'Andriamanitra azy (Mat. 16.16; Mar. 8.29; Lio.9.20). Nolazainy mialoha koa ny hahafatesany sy ny hitsanganany amin'ny maty.
Fotoana faramparany nanaovany ny asanyHanova
Rehefa nanakaiky ny andron'ny Paska jiosy dia nankany Jerosalema farany i Jesoa. Tamin'izany no nandroahany ireo mpivarotra nahazo alalana hivarotra teo ivelan'ny tempoly (Mar. 11.15-19). Tany koa no nitrangan'ny fifanandrinana tamin'ny lohandohan'ny Mpisorona sy ny Fariseo ary ny Sadoseo ny amin'ny nahazoany ny fahefany sy ny hetra aloa amin'i Kaisara ary ny fitsaganan'ny maty ho velona. Nambarany tamin'ireo mpianany ny famantarana ny hiverenany ety an-tany indray. Natahotra ny Mpisorona sy ny Mpanoradalàna sao mampirongatra ny fangejan'ny Romana ny vahoaka Jiosy izao zavatra ataon'i Jesoa izao (Joa. 11.48) ka nanakarama an'i Jodasy Iskariota mba hanolotra an'i Jesoa hosamborina sy hovonoina.
Fisamborana sy fitsarana ary fanomboana an'i JesoaHanova
Ilay Sakafo hariva, nataon'i Leonardo da Vinci, anelanelan'ny taona 1495 sy 1498.
Tamin'ny sakafo hariva farany niarahany tamin'ireo mpiananany i Jesoa no nanambara ny hamadihan'ny iray amin'izy ireo azy sy ny hahafatesany tsy ho ela, ho sorom-panavotana ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Nankany amin'ny Tendrombohitra Oliva i Jesoa sy ireo mpianany ka tao izy no niaritra ny fahorian-tsainy amin'ny fiomanana ny hofaty. Nambarany tamin'izany ny hitsanganany ho velona, avy eo izy nankeo amin'ny sahan'i Getsemane mba hivavaka (Mat. 26.30-32; Mar. 14.26-28). Teo izy no nosamborin'ny vahoaka marobe sy miaramila romana izay notarihin'i Jodasy Iskariota.
Fanomboana an'i Jesoa, nataon'i Gustave Doré
Nentina hotsaraina teo anatrehan'ny Sinedriona i Jesoa ka teo izy no nanontanian'i Kaiafa raha izy no ilay Mesia zanak'Andriamanitra (Joa. 28.13-24; Mat. 26.63). Nohelohina ho faty noho izay heverina ho fitenenan-dratsy an'Adriamanitra nataony i Jesoa ary nanamafy sady nanaiky an'ilay didim-pitsarana i Pontio Pilato. Nentina tany Golgota i Jesoa hovonoina. Maty sady nalevina ny harivan'io andro io ihany izy rehefa nohomboana tamin'ny hazo fijaliana.
Fitsanganan'i Jesoa ho velona sy iraka nampanaovinyHanova
Fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty, nataon'i Hans Rottenhammer, taonjato faha-16.
Nisy anjely nanakodia ny vato nanakatona ny fasana (Mat. 28.2). Ka nony nandeha tany am-pasana ry Maria Magdalena sy Maria renin'i Jakoba mba hanosotra menaka manitra ny vatan'i Jesoa dia tsy hitany tao ny fatiny (Mar. 16.1). Zatovolahy niakanjo fotsy no hitany tao am-pasana izay nilaza tamin'izy ireo fa efa velona i Jesoa ka nitsangana (Mar. 16.5). Taorian'izany dia nifankahita amin'ireo mpianany i Jesoa ka naniraka azy ireo mba hitory ny filazantsara sy hampianatra ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao sady hanao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina (Mat. 28.19). Efapolo andro taorian'ny nitsanganany amin'ny maty dia niakatra ho any an-danitra i Jesoa (Asa 1. 2-12).
Ny finoana momba an'i JesoaHanova
Ny finoan'ny fivavahana kristianaHanova
Ny Kristiana dia mino fa zanak'Andriamanitra i Jesoa nefa ny fiangonana tsirairay dia samy manana ny fomba finoany azy. Ny taranja teolojika ianarana sy andinihana ny amin'izany dia ny kristolojia (izay momba ny toetr'i Jesoa ampifandraisina amin'Andriamanitra sy amin'ny olona).
Fiakaran'i Jesoa ho any an-danitra, nataon'i Gebhard Fugel, 1893 na1894.
Araka ny Filazantsara dia efa nisy talohan'izao rehetra izao i Jesoa. Izy no ilay Teny (na Logos) izay nahariana izao tontolo izao. Izy no ilay Teny tonga nofo. Notorontoronina tamin'ny Fanahy Masina izy ka naterak'i Maria virijiny. Zanak'Andriamanitra izy. Nitsangana ho velona rehefa maty noho ny fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana hanavotany ny olombelona. Ho avy indray i Jesoa amin'ny andro farany hitsara ny olona rehetra ka handray izay mino azy ho any amin'ny Rainy.
Ny mino ny maha Andriamanitra an'i JesoaHanova
Ho an'ny fiangonana kristiana mino ny Trinite dia Andriamanitra tonga nofo i Jesoa Kristy. Tsy zanak'Andriamanitra fotsiny ihany izy fa Andriamanitra Zanaka. Personan' Andriamanitra i Jesoa sahala amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina izay samy persona avokoa. Manana toetra roa izy: sady olona no Andriamanitra. Naterak'Andriamanitra Ray fa tsy natao i Jesoa Kristy. Ny Fiangonana katolika sy Fiangonana ortodoksa ary ny Fiangonana protestanta dia mino ny Trinite.
Ny tsy mino ny maha Andriamanitra an'i JesoaHanova
Misy anefa ny fiangonana izay mihevitra fa ny teny hoe zanak'Andriamanitra dia sarinteny fotsiny na teny azo ampiharina amin'ny olona rehetra izay mino an'Andriamanitra sy manao ny sitrapony. Noho izany, hoy izy ireo, ny finoana ny Trinite dia finoana andriamanitra maro ka anisan'ny fahotana izany. Zavaboarin'Andriamanitra tahaka ny zavaboary rehetra i Jesoa. Misy amin'ireo fiangonana ireo ny manao an'i Jesoa Kristy ho olona fotsiny fa natsangan'Andriamanitra ho zanany. Ao koa ireo mihevitra fa anjely izy. Ny Vavolombelon'i Jehovah dia tsy mino ny maha Andriamanitra an'i Jesoa fa manao azy ho ny anjely Mikaela.
Ny finoan'ny fivavahana tsy kristianaHanova
Ny fivavahana jiosy dia manao an'i Jesoa ho olona fotsiny fa tsy Andriamanitra na zanak'Andriamanitra akory aza. Ny fivavahana silamo dia mihevitra azy ho mpaminany sahala amin'ny mpaminany Mohamady.
Ny fahasamihafan'ny finoana an'i Jesoa dia isan'ny niteraka ny fanaovana konsily (fivorian'ny eveka atao mba hanapahan-kevitra momba ny finoana sy ny fandaminana ny Fiangonana) sy nahatonga ny fandraiketana ireo fanekem-pinoana voalohany. Izany ihany koa no anisan'ny sivana nisafidianana ny boky kanonika ao amin'ny Baiboly.
↑ "Izany koa dia noraisin'ny razantsika izay nandimby ireo, ka nentiny niditra niaraka tamin'i Josoa tamin'ny nahazoany ny tanin'ny firenena izay noroahin'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika hatramin'ny andron'i Davida" (Asa 7.45)
↑ "Fa raha Josoa no nanome azy fitsaharana, dia tsy mba ho nilaza andro hafa Izy tao aorian'izany." (Heb. 4.8)
↑ " ... zanak'i Jesosy, zanak'i Eliezera, zanak'i Joreima, zanak'i Matata, zanak'i Levy, ..." (Lio. 3.29)
↑ "ary Jesosy, izay atao hoe Josto, avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany no mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampiononana ahy." (Kol. 4.11)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesosy&oldid=990627"
Dernière modification le 6 Mey 2020, à 17:24
Voaova farany tamin'ny 6 Mey 2020 amin'ny 17:24 ity pejy ity.